Big City Small World (Series3Episode9- Saving The Business?) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on October 1, 2013 at 15:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series3Episode9- Saving The Business? (အတွဲ (၃) အပိုင်း (၉) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကယ်တင်ခြင်း)
It seems that Fadi has secured the necessary investment for his business. How?
ဖာဒီဟာ လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေပင်ငွေရင်းအာမခံ ရသွားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဘယ်လိုများပါလိမ့်။
Series3Episode9- Saving The Business? ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Harry: Hi there! Have you seen Fadi?
Olivia: Fadi not, not today anyway.
ဖာဒီလား ဟင့်အင်း။ ဒီနေ့မတွေ့သေးဘူး။
Johnny: Hi there! Has anyone seen Fadi today?
ဟေး ဖာဒီ့ကိုဒီနေ့ ဘယ်သူများတွေ့သေးလဲ။
Magda: No! What’s all the interest in Fadi?
ဟင့်အင်း။ ဘာလို့များဖာဒီ့ကိုဒီလောက် စိတ်ဝင်စားနေကြတာလဲ။
Harry: He owes us money!
Olivia: Oh dear ...
Magda: That sounds bad.
Olivia: Is this what happened to his great business idea?
ဒါ သူ့စီးပွားရေး မဟာစီမံကိန်းကြီးဖြစ်ပျက်ပုံလား။
Olivia: Everyone’s looking for you.
Fadi: Aren’t they always?
Magda: Not inagood way, though!
Fadi: Friends, friends ... Have no worries!
သူငယ်ချင်းတို့။ သူငယ်ချင်းတို့. . . သောကမရောက်ပါနဲ့။
Johnny/Harry: What? What are you on about?
Fadi: I have saved the day!
Olivia: Go on ... what have you done this time?
လုပ်ပါဦး။ ဒီတစ်ခါ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲ။
Fadi: Secured the necessary investment to make “FindLondon”ahuge success!
'FindLondon' အကြီးအကျယ်အောင်မြင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရင်းအနှီး ရခဲ့ပြီ။
Harry: You have?
Johnny: And will we get our money back?
Fadi: If you want out, then you can leave.
Johnny: Hmmm ...
Fadi: But be warned ... You will be missing out onamajor moneymaking opportunity.
ဒါပေမယ့် သတိထားနော် . . . မင်းတို့ ငွေဝင်ပေါက်အကြီးကြီးတစ်ခု ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
Harry: How did you save the company?
Fadi: Erm, my uncle, actually. He’s pretty rich. And he thought “FindLondon” tourist services wasareally good idea! So he’s invested lots of money ... and now we’re going to be rich too!
အင်း တကယ်တော့ ငါ့ဦးလေးပါ။ သူကတော်တော်ချမ်းသာတာ။ နောက် သူက "FindLondon" ခရီးသွားလုပ်ငန်းဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးလို့ထင်တယ်။ ဒါနဲ့ သူငွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်တယ်။ . . . ငါတို့ လည်းချမ်းသာတော့မှာပေါ့။
Johnny: OK, then. I’m still in.
Harry: Me too – executive director!
Johnny: Yeah ... well done, Fadi!
Harry: I feel likeareally serious person now! A proper businessman! Even Bindyu’s family will like me!
အခုမှငါ့ကိုယ်ငါ တကယ့်လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ စီးပွားရေးသမားစစ်စစ်တစ်ယောက်။ ဘင်ယုရဲ့မိသားစုတောင် ငါ့ကိုကြိုက်သွားဦးမယ်။
Magda: Oh, Harry! There’s more to life than money you know!
အိုးဟယ်ရီရယ်။ ဘ၀မှာ ငွေထက်အရေးပါတာတွေအများကြီးဆိုတာ နင်သိပါတယ်။
Harry: Hey, I know that – but I don’t think Bindyu’s family do ...
အေးငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘင်ယုရဲ့မိသားစုက သိမယ်မထင်ဘူး။